210 hours and 150 hours Tailoring Training finished – Education Foundation
Notice: Welcome to BEAM.
Financial Partner – EBTM (Formerly BMEP)
Enable Sustainable Social Change Through Education
Higher Education Bridging
Education Foundation > Event > 210 hours and 150 hours Tailoring Training finished
210 hours and 150 hours Tailoring Training finished
December 18, 2017 beam-admin
နာရီ ၂၁၀ နှင့် နာရီ ၁၅၀ စက်ချုပ်သင်တန်းများ ပြီးမြောက်ခြင်း
၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ မှ စတင်ကာ BEAM ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း နှင့် ချင်းမိုင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာကောလိပ်တို့ ပူးပေါင်း၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် အခြေခံစက်ချုပ်ပညာ နာရီ ၂၁၀ ဆရာဖြစ်သင်တန်းနှင့် နာရီ ၁၅၀ အခြေခံ သင်တန်းတို့၏ သင်တန်းပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ်ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ က ချင်းမိုင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နည်းပညာကောလိပ် ခန်းမဆောင်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
သင်တန်းသားဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၁ ဦး အနက် နာရီ ၂၁၀ ဆရာဖြစ်သင်တန်းမှ သင်တန်း ပြီးမြောက်သူ စုစုပေါင်းမှာ ၂၀ ဦး ဖြစ်ပြီး နာရီ ၁၅၀ အခြေခံ သင်တန်းမှ သင်တန်း ပြီးမြောက်သူမှာ ၁၁ ဦး ဖြစ်သည်။ ယင်း သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို သင်တန်းပြီးမြောက်သူများ၊ ချင်းမိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာကောလိပ် နှင့် BEAM ပညာရေး ဖောင်ဒေးရှုင်းမှ ဒါရိုက်တာ များ အပါအ၀င် နှစ်ဖက်သော ၀န်ထမ်းများ နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
BEAM ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း နှင့် ချင်းမိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာ ကောလိပ်တို့ ပူးတွဲကျင်းပ ပြီးစီးခဲ့သော သင်တန်းများမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းက အခြေခံ ကိတ်မုန့်ဖုတ်နည်း သင်တန်း၊ နာရီ ၂၁၀ ဆရာဖြစ် စက်ချုပ်သင်တန်း၊ နာရီ ၁၅၀ အခြေခံ စက်ချုပ်သင်တန်း တို့ ဖြစ်ပြီး လာမည့် ၂၀၁၈ ဇန်န၀ါရီ လလယ်ပိုင်းတွင်မူ ထိုင်းဟင်းချက်ပြုတ်နည်း နာရီ ၁၅၀ သင်တန်းကို ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ခေါ်ယူမည့် သင်တန်းသား ဦးရေ မှာ ၂၀ ဦး ဖြစ်ပါသည်။
နာရီ ၂၁၀ နှငျ့ နာရီ ၁၅၀ စကျခြုပျသငျတနျးမြား ပွီးမွောကျခွငျး
၁၈ စကျတငျဘာ ၂၀၁၇ မှ စတငျကာ BEAM ပညာရေးဖောငျဒေးရှငျး နှငျ့ ခငျြးမိုငျ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး နညျးပညာကောလိပျတို့ ပူးပေါငျး၍ ဖှငျ့လှဈခဲ့သညျ့ အခွခေံစကျခြုပျပညာ နာရီ ၂၁၀ ဆရာဖွဈသငျတနျးနှငျ့ နာရီ ၁၅၀ အခွခေံ သငျတနျးတို့၏ သငျတနျးပွီးမွောကျကွောငျး လကျမှတျခြီးမွှငျ့ပှဲ အခမျးအနားကို ၉ ဒီဇငျဘာ ၂၀၁၇ က ခငျြးမိုငျအသကျမှေးဝမျးကွောငျး နညျးပညာကောလိပျ ခနျးမဆောငျတှငျ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ကွပါသညျ။
သငျတနျးသားဦးရေ စုစုပေါငျး ၃၁ ဦး အနကျ နာရီ ၂၁၀ ဆရာဖွဈသငျတနျးမှ သငျတနျး ပွီးမွောကျသူ စုစုပေါငျးမှာ ၂၀ ဦး ဖွဈပွီး နာရီ ၁၅၀ အခွခေံ သငျတနျးမှ သငျတနျး ပွီးမွောကျသူမှာ ၁၁ ဦး ဖွဈသညျ။ ယငျး သငျတနျးဆငျးပှဲ အခမျးအနားကို သငျတနျးပွီးမွောကျသူမြား၊ ခငျြးမိုငျအသကျမှေးဝမျးကြောငျး နညျးပညာကောလိပျ နှငျ့ BEAM ပညာရေး ဖောငျဒေးရှုငျးမှ ဒါရိုကျတာ မြား အပါအဝငျ နှဈဖကျသော ဝနျထမျးမြား နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျခဲ့ကွပါသညျ။
BEAM ပညာရေးဖောငျဒေးရှငျး နှငျ့ ခငျြးမိုငျအသကျမှေးဝမျးကြောငျး နညျးပညာ ကောလိပျတို့ ပူးတှဲကငျြးပ ပွီးစီးခဲ့သော သငျတနျးမြားမှာ ၂၀၁၆ ခုနှဈအတှငျးက အခွခေံ ကိတျမုနျ့ဖုတျနညျး သငျတနျး၊ နာရီ ၂၁၀ ဆရာဖွဈ စကျခြုပျသငျတနျး၊ နာရီ ၁၅၀ အခွခေံ စကျခြုပျသငျတနျး တို့ ဖွဈပွီး လာမညျ့ ၂၀၁၈ ဇနျနဝါရီ လလယျပိုငျးတှငျမူ ထိုငျးဟငျးခကျြပွုတျနညျး နာရီ ၁၅၀ သငျတနျးကို ကငျြးပ ပွုလုပျသှားမညျ ဖွဈပါသညျ။ ချေါယူမညျ့ သငျတနျးသား ဦးရေ မှာ ၂၀ ဦး ဖွဈပါသညျ။
210 hours Tailoring TOT Training and 150 hours Tailoring Short Course Training started on 18 September 2017 in collaboration of Chiang Mai Polytechnic College and BEAM Education Foundation has successfully finished. The graduation ceremony was held on 9th December 2017 at Chiang Mai Polytechnic College Ballroom.
Among 31 students for both training, 20 students are from 210 hours Tailoring TOT Training and 11 students are from 150 hours Short Course Training. Not only the trainees but also the directors and staff from Chiang Mai Polytechnic College and BEAM Education Foundation attended the ceremony.
The vocational trainings finished in collaboration of Chiang Mai Polytechnic College and BEAM Education Foundation are the Bakery Training in 2016, 210 hours Tailoring TOT Training and 150 hours Short Course Training. As the future plan, Thai Cuisine Training will be held during January 2018. The estimated student number is 20 and the course will last for 150 hours.
Chiang Mai Citylife Garden Fair 2017
Congratulations University Graduate
Copyright: BEAM Education Foundation All rights reserved.